Lisitra fanamarinana Podcast, Syndication, lisitry ny fanentanana | Martech Zone
Tamin'ny taon-dasa no taona nipoaka ny lazan'ny podcasting. Raha ny marina dia 21% ny Amerikanina mihoatra ny 12 taona no nilaza fa nihaino podcast tamin'ny volana lasa, izay nitombo tsy nitsaha-mitombo isan-taona tamin'ny fizarana 12% tamin'ny 2008 ary hitako fa nitombo hatrany io isa io.
Ka nanapa-kevitra ny hanangana podcast anao manokana ve ianao? Misy zavatra vitsivitsy tokony hodinihina aloha - aiza no hampiantranoanao ny podcast anao sy izay hampiroboroboanao azy. Ireto ambany ireto dia nitanisa toro-hevitra vitsivitsy sy lesona ianarana avy amin'ny fampiroboroboana ny podcast anay Edge of the Web, ka manantena aho fa hampiasaina ho anao ireo!
Atrikasa Podcasting sy fampisehoana
Vao haingana aho no namolavola atrikasa ho an'ireo podcasters orinasa hametrahana paikady manokana hananganana sy hampiroborobo ny podcasts-ny. Nampiasainay ny ankamaroan'ireo fomba ireo tamin'ny Podcast Dell Luminaries, manosika azy ho any amin'ny 1% ambony amin'ireo podcast fandraharahana rehetra.
Aiza no hampiantrano ny Podcast anao
Alohan'ny hizarana amin'ny lahatahiry, mila manapa-kevitra ianao amin'izay tianao haleha miaramila podcast anao. Ny fanapaha-kevitra ny fampiantranoana podcast anao dia miankina betsaka amin'ny toerana ahafahanao mandefa ny podcast anao satria misy lahatahiry sasany mifandray amin'ny hafa. Ho an'ny podcast anay, Edge of the Web, mampiantrano anay izahay miaraka amin'i Libsyn ary izy io dia iray amin'ireo mpampiantrano malaza kokoa manodidina.
Aza mampiantrano ny podcast anao amin'ny mpampiantrano mahazatra na amin'ny tranokalanao ankehitriny. Ny tontolon'ny fampiantranoana Podcast dia manana fotodrafitrasa namboarina ho an'ny rakitra audio sto stream lehibe ary alaina avy amin'ny tranonkala. Ny tontolon'ny fampiantranoana tranonkala mahazatra dia mety hiteraka fahatapahana fihainoana ary mety handany vola amin'ny vidiny mihoampampana amin'ny fampiasana bandwidth.
Douglas mampiantrano Martech Zone Interviews, Mivoaka ny faribolana, ary Mpilalao veteranina amin'ny takariva amorom-patana, mpampiantrano podcast tokana miaraka amina interface tsara amin'ny mpampiasa izay mampiditra tranokala roa miaraka amin'ny podcast anao. Ny tranokala koa dia manome endri-javatra tsy manam-paharoa taonina, ao anatin'izany ny mpampiantrano tsy voafetra, ny mombamomba ny vahiny tsy voafetra, ny dokam-barotra mpanohana, ny fampisehoana rohy, ny rohy famandrihana, ny fizarana pejy ary ny mpilalao podcast HTML5 manaitra.
Orinasa fampiantranoana podcast hafa azonao ampiasaina dia:
Acast - Fahitana Podcast, fihainoana, fampiantranoana ary fizarana RSS.
vatofantsika - Mamorona sy mampiantrano fizarana tsy manam-petra, zarao ny seho misy anao na aiza na aiza, ary mahazo vola. Amin'ny toerana iray daholo, maimaim-poana daholo.
Audioboom - Ampiasao ireo mpihaino voatokana ary ento ny hafatry ny marikao amin'ny alàlan'ny fampidirana dokam-barotra sy fanekena avy amin'ny talenta ambony amin'ny podcasting.
Blubrry - Blubrry.com dia vondrom-piarahamonina podcasting sy lahatahiry izay manome ny mpamorona fahefana hahazoana vola, mahazo refy amin'ny antsipirian'ny mpanatrika ary hampiantrano ny rakipeo sy ny lahatsarin'izy ireo. Na mpamorona haino aman-jery ianao, mpanao doka na mpanjifa haino aman-jery, Blubrry no mpamatsy haino aman-jery nomerika anao.
Buzzsprout - Atombohy ny podcasting anio amin'ny fampiantranoana podcast maimaim-poana avy amin'ny Buzzsprout, rindrambaiko podcasting mora indrindra amin'ny fampiantranoana, fampiroboroboana ary ny fanarahana ny podcast anao.
Natsipy - Manomboka amin'ny fampiantranoana sy ny fandaharam-potoana ka hatramin'ny fampahavitrihana sy analytics, Casted dia sehatra fitantanana atiny ho an'ireo mpivarotra B2B miaraka am-peo.
Libsyn - Libsyn dia manome izay rehetra ilainao amin'ny podcast: fitaovana fanontana, fampiantranoana haino aman-jery ary fandefasana, RSS ho iTunes, tranokala, statika, programa dokambarotra, atiny Premium, fampiharana ho an'ny fitaovana Apple, Android & Windows.
mégaphone no alaonareo - fitaovana hamoahana, hanomezana vola ary handrefesana ny orinasanao podcast.
Omny Studio - Omny Studio dia vahaolana podcasting an'ny orinasa izay misy editor iray amin'ny Internet, fanodikodinam-bola, fakana sary, fitaterana ary endri-javatra maro hafa.
PodBean - Vahaolana famoahana podcast tsotra indrindra. Fefy bandwidth sy fitehirizana tsy voafetra. Izay rehetra ilain'ny podcaster fampiantranoana, hampiroboroboana ary hanarahana ny podcast-nao.
Tsotra - Avoahy amin'ny fomba mora ny podcast-nao.
Soundcloud - Ny podcasting amin'ny SoundCloud dia manamora ny filazan'ny olona tantara sy fampakarany ary fizarana. Amboary ny vondrom-piarahamoninao amin'ny sehatra fampiantranoana feo azo antoka sy matanjaka indrindra manerantany.
Spreaker - Spreaker no manana azy rehetra! Amboary ny kaontinao ary miomàna hanoratra podcast na hampiantrano fandaharana amin'ny radio mivantana avy amin'ny solosainao na fitaovana findainao.
Podcast Jet - Hosting Podcast Premium: Fanaterana haingana sy havaozina.
Aorian'ny fametrahana ny fampiantranoana podcast anao dia mila manana RSS RSS marina ianao. Imbetsaka rehefa manangana ny kaonty fampiantranoana podcast ianao dia tsy hahita zavatra manimba ny RSS feed. Alohan'ny handefasana any amin'ny lahatahiry, mila manamarina ianao raha toa ka mitombina ny fahana RSS anao. Mba hitsapana ny fahana RSS anao dia ampiasao Cast Validator Fahano hijerena raha nisy lesoka nataonao. Raha manana fahana ara-dalàna ianao dia mitsambikina amin'ny alàlan'ny lahatahiry anao.
Aiza no hanamafisana ny podcast anao
Fanamarihana: Alohan'ny handefasanao ny podcasto amin'ireo lahatahiry misy, mamporisika anao aho mba hanana fizarana podcast mihoatra ny iray amin'ny fahana RSS-nao. Azonao atao ny mandefa ny ankamaroan'ny lahatahiry amin'ny podcast iray fotsiny, fa ho an'ny ankamaroan'ny mpihaino ny podcast anao dia te-hahita mihoatra ny fizarana alohan'ny hisoratra anarana amin'ny seho ianao.
satria iPhone ary Android fitaovana manjaka amin'ny tsenan'ny finday, ireto fisoratana anarana roa voalohany ireto dia ilaina isaky ny podcast!
iTunes - Rehefa avy namorona ny fahana RSS anao ianao, ny fandefasana ny podcast anao amin'ny iTunes no tokony ho dingana voalohany. iTunes dia iray amin'ireo tambajotram-pihainoana malaza indrindra ho an'ireo podcasters. Mila manana ID Apple aloha ianao, raha efa manana iPhone dia tokony hanana ID sahady. Midira ato amin'ity iTunes Podcast pejy fifandraisana amin'ny Apple ID anao ary apetaho ao anaty saha URL ny feed RSS anao ary apetraho ny sehoo. Miankina amin'ny kaontinao, mety hahazo fankatoavana haingana izy io na afaka roa andro. Vantany vao ekena ianao ao amin'ny iTunes, hiseho amin'ny podcatchers hafa maro hafa ny seho ataonao rehefa mahazo ny sakafony avy any iTunes ireo fitaovana ireo. Mampalahelo fa amin'ny iTunes dia tsy hahazo ianao Analytics mifandray amin'ny kaontinao.
Soraty amin'ny iTunes ny Podcast anao
Google Podcasts Manager - Google dia namoaka sehatra iray miaraka amina analytics miavaka hanarahana maso ny fihainoana ny podcast anao. Azonao atao ny mahita ny isan'ny tantara an-tsehatra, ny filalaovana ao anatin'ny 30 andro voalohany, ny faharetan'ny antsalany, ary avy eo manara-maso ny fahombiazan'ny fotoana. Midira amin'ny kaonty Google, ary araho ny dingana ampio ny podcast anao.
Soraty amin'i Google ny Podcast anao
Pandora - Pandora dia manohy mpihaino marobe ary manohana feno podcast ihany koa, na dia manana fahaizana mitantana azy aza.
Soraty amin'ny Pandora ny podcast anao
Spotify - Spotify dia manohy mivelatra amin'ny atiny audio ary, miaraka amin'ny fividianana ny Vatofantsika, dia mikendry tanjona hanana ny lanjany. Miaraka amin'ny mpampiasa marobe, tsy te-ho diso anjara ianao!
Soraty amin'ny Podify ny Podcast anao
Amazon - Amazon Music dia olom-baovao nefa miaraka amin'ny Audible, Prime, ary ny mpanampy ny feo an'i Alexa, tsy tokony hiala amin'ity fantsona manan-danja ity ianao.
Soraty amin'ny Amazon Music ny Podcast anao
Raha azo atao, azonao atao koa ny manoratra ny podcast anao amin'ireto fitaovana sy lahatahiry ireto hanitarana ny tratranao:
Acast - Na dia fampiantranoana mpamatsy hafa aza ny podcast anao dia azonao atao ny manoratra ny podcast anao amin'ny kaonty fanombohana maimaim-poana.
Ampio ny Podcast anao amin'ny Acast
AnyPod - AnyPod dia fahaizana malaza amin'ny fitaovana ampiasain'ny Amazon Alexa.
Ampio ny Podcast anao any AnyPod
Blubrry - Blubrry dia ny lahatahiry podcast lehibe indrindra amin'ny Internet ihany koa, miaraka amin'ireo podcast 350,000 XNUMX mahery voatanisa. Izy ireo koa dia manome doka sy serivisy hafa ho an'ireo podcasters.
Mamorona kaonty Blubrry maimaim-poana ary ampio ny Podcast anao
mpandika - mpandika dia tsena hivarotana sy hampiroborobo ny podcast anao. Tena tsara ny fampiharana azy ireo, ary manampy ny fizarana ara-tsosialy ny podcast anao.
Ampifandraiso amin'ny Podcast ny Podcast anao
Castbox - Castbox manome ny Castbox Creator Studio, andiana fitaovana miaraka amina analytics podcasting matanjaka hahafahanao mandrefy sy mifampiraharaha amin'ireo mpamandrinao ary koa mandefa ary manome fampidinana.
Toro-lalana amin'ny fandefasana ny Podcast anao amin'ny Castbox
iHeartRadio - Fa iHeartRadio, eto no mandoa ny fananan'i Libsyn ho mpampiantrano anao. Manana fifandraisana amin'i iHeartRadio izy ireo ary azonao atao ny manangana ny kaontinao Libsyn hamorona sy hanome sakafo ho azy ny fantsonao manokana. Mba hametrahana izany, eo ambanin'ny kiheba "Toerana" ao amin'ny kaontinao, kitiho ny "Add New" ary araho ny torolàlana hananganana renirano iHeartRadio. Fanamarihana: ny podcast-nao dia mila mihetsika mandritra ny roa volana mahery ao anatin'ny Libsyn alohan'ny ahafahanao mandefa any iHeartRadio.
Atolory ny Podcast anao any iHeartRadio
Nanjombona - Raha efa ao amin'ny iTunes ny podcast anao dia hiseho ao anatin'ny iray andro amin'ny Overcast izy io. Raha tsy izany dia azonao atao ny manampy azy io amin'ny tanana:
Ampio amin'ny tanana amin'ny tanana mavesatra ny Podcast anao
Pocket Mandroaka - Fampiharana miorina amin'ny tranonkala sy finday ahafahan'ny mpampiasa mitantana sy mihaino manerana ny fitaovana. Alefaso amin'ny alalany ny podcasto Pocket Casts dia manolotra page.
Atolory ny Podcast anao amin'ny Pocket Casts
Podchaser - tahiry podcast sy fitaovana fikarohana. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanamora ny fanomezana valiny momba ireo podcast tianao ary hahita podcast mora foana. Tadiavo ao amin'ny Podchaser ny podcast anao ary azonao atao ny mangataka azy amin'ny alàlan'ny mailaka voasoratra anarana ao amin'ny feed podcast anao.
Takio amin'ny Podchaser ny Podcast anao
Podknife - Podknife dia lahatahiry podcast an-tserasera izay miasa be amin'ny fandaminana ireo podcast isaky ny lohahevitra sy toerana. Afaka mamerina mijery sy mankafy ireo podcast tiany ihany koa ireo mpampiasa. Raha vao misoratra anarana sy miditra ianao dia hahita rohy fandefasana ao amin'ny menio.
Misoratra anarana amin'ny Podknife
RadioPublic - RadioPublic no podcasters fihainoana podcast fihainoana mahomby, azo ovaina ary maharitra ara-bola. Ampianay ny mpihaino hahita, hiaraka ary hanome valisoa ara-bola ireo mpanao podcast — ianao. Hamarino ny sehoo amin'ny RadioPublic hanombohana mifandray amin'ny mpihaino anao anio.
Takio ny Podcast anao amin'ny RadioPublic
Stitcher - Ho ahy manokana, Stitcher no fampiharana podcast tiako indrindra. Ny fihainoako podcast rehetra dia vita amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Stitcher dia rindrambaiko maimaimpoana misy fandaharana amin'ny radio sy podcast mihoatra ny 65,000. Raha te-handefa ny podcast anao dia mila misoratra anarana ho mpiara-miasa ianao. Hita ao amin'ny Partner Portal koa ny statistikan'ny fampisehoana anao.
Ampio ny Podcast anao amin'ny Stitcher
TuneIn - TuneIn dia lahatahiry maimaimpoana hafa azonao andefasana ny podcast anao. Raha te-handefa ny podcast anao dia mila mameno ny endriny ianao. Tsy hanana kaonty amin'ny TuneIn toa anao amin'ny lahatahiry hafa. Noho izany, raha mila manavao na inona na inona amin'ny sakafonao ianao dia mila mandalo an'ity dingana ity indray. TuneIn koa dia manana ny Fahaiza-manao Amazon izay ahafahan'ny podcast-nao hilalao amin'ny alàlan'ny fitaovana mandeha amin'ny alàlan'ny Alexa!
Ampio ny Podcast anao amin'ny TuneIn
Vurbl - toerana fandefasana feo ho an'ny karazana mpamorona raki-peo, sy izay rehetra te-hihaino audio. Manohana ireo mpamorona feo izahay amin'ny alàlan'ny maodelin'ny onjam-peo misy anay ary manampy ny mpihaino hifandray amin'ny atiny misy dikany azo henoina.
Takio ny gara Vurbl anao
Mizarà Audiograms amin'ny media sosialy
Audiogram - Avadiho amin'ny horonan-tsary momba ny fiaraha-monina ny feonao Audiogram.
Headliner - Mamorona audiograms onjam-peo, fizarana feno amin'ny horonan-tsary, mandika azy ho azy ary mampiroborobo ny podcasto amina horonantsary betsaka araka izay itiavanao azy Headliner.
Wavve - Wavve ahafahanao mamorona audiograms - horonan-tsary amin'ny audio podcast anao - izay azo zaraina ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny mpilalao azy ireo.
Ahoana ny fomba hanatsarana ny podcast anao
Fantatrao ve fa mandefa podcast i Google ankehitriny ary mampiseho izany amin'ny carousel amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana? Google dia manome antsipiriany momba ny dingana mankany alao antoka fa voarakitra ny index ny podcast anao ao amin'ny lahatsoratr'izy ireo. Nanoratra aho hoe ahoana no ahazoana antoka fa fantatr'i Google fa manana podcast ianao raha manana WordPress fa mampiantrano podcast amin'ny podcast ivelany serivisy fampiantranoana.
Manampia Banner Smart Podcast
Ny fitaovana iOS dia manana fahaizana manampy sora-baventy maranitra eo an-tampon'ny tranonkalanao ho an'ny mpampiasa Apple iPhone hijerena ny podcast anao, hanokatra azy amin'ny Podcasts App ary hisoratra anarana amin'izany. Azonao atao ny mamaky ny fomba hanaovana an'io ato amin'ity lahatsoratra ity iTunes Smart Banners for Podcasts.
Misy ihany koa ny lahatahiry misy karama azonao ampiasaina hampiantranoana ny podcast anao na hampiasa anao ho toy ny lahatahiry hafa. Na dia mety misalasala handoa ny sasany amin'ireo aza ianao, dia tsy fantatrao mihitsy hoe aiza no mihaino ny mpihaino anao. Manoro hevitra ny hanandrana azy rehetra mandritra ny herintaona farafahakeliny aho ary hijery hoe inona ny statistika azonao avy amin'ireto lahatahiry ireto alohan'ny hanafoanana anao. Ny ankamaroan'izy ireo dia manomboka amin'ny kaonty maimaim-poana, saingy ho lany haingana ny habaka ao amin'ny kaontinao maimaimpoana.
Acast - Acast manolotra izay ilainao rehetra hamoronana sy hizarana ny podcast anao na aiza na aiza.
AudioBoom - AudioBoom ahafahan'ny podcasters mampiantrano, mizara ary manome vola ny audio anao.
PodBean - PodBean dia mitovy amin'ny Spreaker amin'ny maha-mpampiantrano podcast azy. Raha ny fanandramana anay dia nisy ny olana tamin'ny fanafarana ny sakafonay RSS satria tsy hahazo ny fizarana farany indrindra izany. Saingy, mpampiantrano malaza eo amin'ireo podcasters izy io.
PodSearch - Manolotra fitaovana fikarohana mora ampiasaina ny PodSearch, ao anatin'izany ny sokajy, seho ambony, seho vaovao, ary teny lakile, hanampiana anao hahita podcast tianao. Register here.
SoundCloud - Soundcloud dia iray amin'ireo lahatahiry vaovao indrindra izay ananan'ny Edge of the Web Radio ary miaraka amin'ny kaontinay Libsyn, afaka niaraka nampifanindray azy roa miaraka izahay ary ny famoronana ny kaonty dia tena tsotra tamin'ny alàlan'ny Libsyn.
Spreaker - Spreaker dia mpampiantrano malaza, indrindra eo amin'ireo podcasters te handefa mivantana. Manana mpilalao mahay izy ireo izay hamela anao hanao ny streaming mivantana ary hanangona ny fizarana tsirairay ho an'ireo izay tsy nahita ny fandaharana mivantana.
Azoko antoka fa misy olon-kafa, saingy ireo no lahatahiry ampiasainay Edge Media Studios ho an'ny mpanjifa famokarana podcast. Raha manana olon-kafa mety tsy hitako ianao dia aza hadino ny milaza izany amin'ireo hevitra etsy ambany!
Mpilalao Web Podcast
Widget Widget Podcast WordPress - na aiza na aiza fampiantranoana ny podcast anao, ny manampy azy amin'ny tranokalanao dia fomba tsara iray hahazoana mpihaino mifandraika. Ny WordPress Podcast Sidebar dia mamela ny widget na ny kaody fohy hampiditra ny fahana podcast anao (miaraka amina mpilalao) na aiza na aiza amin'ny tranonkalanao.
Jetpack - Ny plugin premiere an'ny WordPress hanatsarana ny tranokalanao izao dia manana sakana podcast azonao ampidirina amin'ny atiny izay mamorona mpilalao podcast ho azy.
Ireto misy plugins fanampiny misy karama fanampiny izay hampiseho ireo podcast malalanao ao anatin'ny WordPress.
MP3 Plugy Player WordPress Plugin
Royal Audio Player Plugin WordPress
Easy Audio Player Plugin WordPress
Aza adino ny anjara toerana lehibe azon'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fampiroboroboana ny podcast anao, na vaovao na taloha! Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram… na Google +… aza dia afaka manampy anao hampitombo ny mpihaino anao ary handefa mpihaino sy mpamandrika bebe kokoa ho an'ny atiny.
Miaraka amin'ny fitaovana fitantanana media sosialy toa Agorapulse, azonao atao ny milahatra an-jotra amin'ireo mombamomba ireo aminà mora foana, ary koa manangana fizarana miverimberina ho an'ireo podcast izay heverinao ho maitso maharitra mandrakizay. Na, raha mampiasa fitaovana toa izany ianao Feedpress, azonao atao ny mamoaka ho azy ny podcast anao amin'ny mombamomba anao.
Rehefa mampitombo ny mpihaino anao amin'ireo sehatra ireo ianao, mety tsy nahita ireo podcast taloha ny mpankafy vaovao, ka izany no fomba tsara iray hampitomboana ny fahitana. Ny lakileny dia ny famoronana lahatsoratra media sosialy manintona fa tsy fandefasana fotsiny ny lohateny podcast anao. Manandrama mametraha fanontaniana na tanisao ny lisitry ny fitaterana lehibe. Ary raha nanadinadina ianao na nanonona marika na influencer hafa dia aza hadino ny mametraka azy ireo ao amin'ny fizaranao ara-tsosialy!
Fampahafantarana: Mampiasako ireo rohy ifandraisako amin'ity lahatsoratra ity ho an'ny vokatra vitsivitsy.
Tags: acastamazon musicanypodaudioboomblubrryboaty castCastrohaino aman-jerystudio media edgelahatahiry epodgoogle playiheartradioiTunesJetpacklibsynPodcast Marketingtafatafa martechpodanàlahatahiry podcastlahatahiry podcastfeed podcastfampiantranoana podcastmetatra podcastfampiroboroboana podcastsyndication podcastpodcastingpodchaserpodknifefampahafantaranaSoundcloudspotifyspreakerstitcheratolory ny podcast anaoSyndicationTuneInvurblwavveaiza no hampiantranoaiza no hampiroboroboaiza no hanao syndicateWordPress
Ahoana ny fananganana ekipa mpamorona Scorecard mpanatanteraka hanehoana ny lanjan'izy ireo amin'ny C-Suite